Abantu baseParis eHamptons (Ixesha Elide) - I-Airbnb
Abantu baseParis eHamptons (Ixesha Elide)
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguCertified Superhost - Romer
UCertified Superhost - Romer yi-Superhost
Ababuki zindwendwe bagonywe ngokupheleleyo nge-booster ngokuchasene ne-COVID-19. Olu luhlu lolwendawo yokuhlala ixesha elide kuphela. Indawo yakho yexesha elide (iintsuku ezingama-31 nangaphezulu) ibandakanya:
★Igumbi lokulala labucala kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo labucala
★Igumbi lokuphumla labucala langaphandle
★ WiFi yesantya esiphezulu yasimahla
★Inkcazo ephezulu kamabonakude.
★Ukusetyenziswa simahla kwewasha kunye nesomisi.
★Ikhitshi langoku eligcweleyo.
★Ubumelwane obukhuselekileyo nokhuseleko lwabucala.
★Izinto eziluncedo ezikumgangatho ophezulu ukufanele kwaye uzilindele.
★ Ilayisensi yoshishino evela kwiSixeko saseSacramento.
Olu luhlu lolwendawo yokuhlala ixesha elide kuphela. Indawo yakho yexesha elide (iintsuku ezingama-31 nangaphezulu) ibandakanya:
★IiPaki zasimahla kwindawo.
★Ukusetyenziswa simahla kwewasha kunye nesomisi
★Ikhitshi langoku eligcweleyo
★ Ilayisensi ekhutshwe siSixeko saseSacramento.
★Ngoosokhaya Abaqinisekisiweyo baka-Airbnb
Indawo yaseHamptons yindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo. luluntu olunqweneleka kakhulu. Uyakonwabela ukuhlala kwakho nathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Certified Superhost - Romer
Ujoyine nge- 2009 Meyi
Sinikezela ngemfihlo epheleleyo kuzo zonke iindwendwe zethu. Sibakho xa sifuneka kwaye singabonakali xa singafunwa.
Ukukhusela iindwendwe zethu ezixabisekileyo kunye nathi, siphumeze la manyathelo alandelayo ezempilo nokhuseleko:
★Izibulali ntsholongwane zosula okanye isitshizi
★Nika isicoci sesandla esitsha kwiindwendwe.
★Ubukho bezicoci zezandla kwindawo yonke.
★Ukucocwa rhoqo kwesibulali ntsholongwane kumagumbi, imicrowave, ifriji, amaqhosha ecango, izitshixo, iiremothi, njl.
★Ziqhelanise nomgama wokuhlala.
★Iitawuli zephepha ezilahlwayo
★Isicoci semiphezulu emininzi
★Isibulali ntsholongwane sesandla esibulala amagciwane
★Isepha yesandla esongezelelweyo
Ukukhusela iindwendwe zethu ezixabisekileyo kunye nat…
Inombolo yomthetho: City of Sacramento BOT No. 1034958
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sacramento